Category ဓာတ်ပုံပြင် application များ – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
ShareRF horror & scary photos Light
သရဲပုံစံ စိတ်ကြိုက်ဖော်လို့ ရပါတယ်. လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် သုံးရတာ အဆင်ပြေစေပါတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ ချောလှတဲ့ More... by shllow way | Published 22 days ago
By shllow way On Tuesday, April 30th, 20130Comments TouchRetouch Share TouchRetouch
ဓါတ်ပုံတွေမှာ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အရာလေးတွေကိုဖျက်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ..သုံးရတာလွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာ
(ဥပမာ More... By အမျိုးကောင်းသား On Tuesday, April 16th, 20132Comments Adobe Photoshop CS6 Extended v13.1.2 Portable 400MB Share
Adobe Photoshop ဆိုရင် ဘယ်မှာသုံးတယ်ဆို အားလုံးသိမှာပါ
မန်မိုရီကတ်ကနေ ထည့်ပြီးတော့ More... By KSA On Friday, March 15th, 20132Comments PicsPlay Pro app for iPhone/iPad/iPod Share
ကျွန်တော်သုံးခဲ့သမျှ Android app အပါအဝင်တွေထဲမှာ ဒီ Photo app က အကောင်းဆုံးပဲဗျာ….Photo Effect, More... By ကောင်းမြတ်ဦး On Thursday, October 11th, 2012 1 Comment ဓာတ်ပုံတွေကို အလန်းစားရိုက်ကူးဖို့နဲ့ မျှဝေဖို့အတွက် Instagram 3.2.0 For Android Share
Android Device တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံအလန်းစားတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့နဲ့ ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို More... By Nicky Paing On Saturday, September 29th, 2012 1 Comment AndroMedia Video Editor (Version 1.8) for Android Share
ကဲ… Android အတွက်ရော Video Editing App မရှိဘူးလားလို့မေးကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် AndroMedia Video Editor More... By Nicky Paing On Tuesday, September 18th, 20120Comments Color Splash V 1.7.2 for iPhone/iPad/iPod Touch Share
MMAS ချစ်သူများအတွက်ခပ်လန်းလန်းဓာတ်ပုံပြင် App လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တစ်ခြားသောဓာတ်ပုံပြင် More... By ကောင်းမြတ်ဦး On Wednesday, September 12th, 20120Comments ဓာတ်ပုံတွေမှာ Troll ရုပ်ပြောင်လေးတွေ ထည့်ကြမယ် Shareအခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ Troll ရုပ်ပြောင်ကလေးတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပုံတွေမှာ ထည့်သွင်း More... By KSA On Friday, August 24th, 20120Comments Arc S အတွက် Custom Ice Beam Rom မှာပါတဲ့ Album App Shareဒီ app လေးက system app လေးပါ။ Sony Xperia Arc S အတွက် ထွက်တဲ့ Jelly Beam custom rom တင်တုန်းက ပါတဲ့Album app လေးပါ။ တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်…. More... By ကောင်းမြတ်ဦး On Tuesday, July 31st, 20120Comments ပုံရိပ်များကို အလန်းစား ရိုက်ကူးချင်သူများအတွက် Camera360_Ultimate_3.3.6 ShareAndroid OS သုံးဖုန်းတွေမှာ ဓာတ်ပုံတွေကို အလန်းစား ရိုက်ချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ More... Next Page »
htetpunnlying on RedLink မှ WiMax အင်တာနက်လိုင်းများကိုအခမဲ့တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မည်ko ko on ImTOO iPhone Apps Transfer 1.3.1 For PcTheingi Aung on K-Pet Girl 2♥Pocket Girl EMILY (ready hack money)JingJing on V Root လို့ခေါ်တဲ့ Onclick Root Tool လေးပါခင်ဗျာYu Win on Galaxy S3 LTE( GT-I9305) jellybean 4.1.2 အား root ဖောက်ခြင်း Android Development